China Povidone-K90 / PVP-K90 orinasa mpamokatra sy mpamatsy | Springchem
Anaran'ny vokatra:Povidone-K90 / PVP-K90
Anaran'ny marika:MOSV K90
CAS #:tsy misy
POVIDONE-K90 (C6H9NO) n
Povidone (polyvinylpyrrolidone, PVP) dia ampiasaina amin'ny indostrian'ny fanafody ho toy ny fiara polymer synthetic amin'ny fanaparitahana sy fampiatoana ny zava-mahadomelina. Manana fampiasa maro izy, ao anatin'izany ny binder ho an'ny takelaka sy kapsula, sarimihetsika taloha ho an'ny vahaolana ophthalmic, mba hanampiana amin'ny fametahana ranon-javatra sy takelaka azo tsakoina, ary ho toy ny adhesive ho an'ny rafitra transdermal.
Povidone dia manana ny molekiola (C6H9NO) n ary miseho ho fotsy amin'ny vovoka fotsy kely. Ny famolavolana povidone dia be mpampiasa amin'ny indostrian'ny fanafody noho ny fahafahan'izy ireo mivoaka amin'ny solvent solon'ny rano sy ny solika. Ny isa k dia manondro ny lanjan'ny molekiola povidone. Povidones manana K-soatoavina avo kokoa (ie, k90) dia matetika tsy omena tsindrona noho ny lanjan'ny molekiola avo. Ny lanjan'ny molekiola avo kokoa dia manakana ny fivoahan'ny voa ary mitarika fiangona ao amin'ny vatana. Ny ohatra malaza indrindra amin'ny famolavolana povidone dia povidone-iodine, famonoana otrikaina manan-danja.
Mikoriana maimaimpoana, vovoka fotsy, fitoniana tsara, tsy mahasosotra, mety levona anaty rano sy etnol, azo antoka ary mora ampiasaina, .Mandaitra amin'ny famonoana bacillus, viriosy & epiphytes .Mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny velarany.
Misy toy ny vovo-dronono maimaimpoana, mena volo mena, tsy mahasosotra amin'ny fitoniana tsara, mihalefaka amin'ny rano sy alikaola, tsy voavaha amin'ny diethylethe sy kloroform.
Bika Aman 'endrika Vovoka fotsy na fotsy mavo
K-Sarobidy 81.0 ～ 97.2
PH Sarany （5% amin'ny rano） 3.0 ～ 7.0
Residue amin'ny ignition% ≤0.1
Lead PPM F10
Hydrazine PPM F1
Nitroka% 11.5 ~ 12.8
Peroxides (toy ny H2O2) PPM ≤400
25KGS isaky ny amponga baoritra
Roa taona raha tehirizina ao anaty fepetra mangatsiaka sy maina ary fitoeram-bokatra mihidy tsara
Polyvinylpyrrolidone matetika amin'ny endrika vovoka na vahaolana misy. PVP amin'ny mousse kosmetika, fipoahana, ary volo, loko, ranomainty fanontam-pirinty, lamba, pirinty ary fandokoana, azo ampiasaina ho fantsom-panafody ambonimbony, mpandraharaha manaparitaka, mpamatotra, mpamatotra. Amin'ny fanafody no be mpamehy indrindra ampiasaina amin'ny takelaka, granula sns.
Fampiasana Pvp K90 amin'ny tsiranoka volo
Pvp K90 ampiasaina amin'ny haircare
Proteinina Conchiolin Hydrolyzed